Ka hel cunnooyinka Cidhibta Tartanka Swank Soles - Cunnooyinka Shaagagga
Kusoo qaado qaadashada Cunnooyinka Tartanka Heels Swank Soles
Ku cusub Cunnooyinka Ciribta sanadkaan oo aad layaabantahay waxa uu yahay Tartankan Swank Soles? Meel dheer ha fiirin!
Sannad kasta Cunnooyinka Cidhibta, kaqeybgalayaashu waxay iibsadaan ama abuuraan kabahooda fiidkii. Waxaan aad u dhiirigelinaynaa hal-abuurka, markaa ku baashaal oo ku soo bandhig qaab. Lagu daro kanaga Cuntooyinka tigidhada Cidhibtirka (100% ee kaalmada lagu kasbado Cuntada Taayirada!) Ayaa laga galayaa tartanka.
Haddaba sidee buu u shaqeeyaa tartanku? Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso si aad u gasho tartanka ayaa lulaya aagga sawirka Swank Soles halkaas oo kabahaaga quruxda badan laga sawiri doono garsoorayaasha inay tixgeliyaan.
Tartanku wuxuu xirmayaa 7:45, garsoorayaashayada caanka ah ee Swank Soles, Falen oo ka socota KDWB iyo Kelly O'Connell oo ka socota Fox 9, ayaa dooran doona saddexda nin iyo saddexda haween ee u dambeeya inay ku soo biiraan masraxa.
Kadib, guuleystayaasha waxaa lagu dooran doonaa sacab tumista dhagaystayaasha, mid walbana wuxuu heli doonaa xirmo abaalmarin ah oo lagu qiimeeyo $250!
Haddii aad ubaahantahay dhiirrigelin, halkan waxaa kaaga yaal sawirro sanadihii hore:
Ma sugi karno inaan aragno kabaha goynaya oo lagu soo bandhigi doono Meals on Heels sanadkan! Oo haddaadan weli helin, tikidhadaada halkan ka hel!